श्रीमान बिदेशमा मलाइ यौन सम्पर्क बिना निन्द्रा लाग्दैन के गर्ने होला ? – hamrosandesh.com
श्रीमान बिदेशमा मलाइ यौन सम्पर्क बिना निन्द्रा लाग्दैन के गर्ने होला ?
विश्वमा केहि यस्ता रा,ष्ट्रहरु छन् जहाँ युवतीको संख्या कम भएका कारण युवकहरु बिहे गर्न पाएका छैनन् ।
तर विश्वमा यस्तो रा,ष्ट्र हरु पनि छन् जहाँ बिहेको लागि युवतीहरु कु’वारी बस्न पनि बाध्य भएका छन् । यस्तै आज हामी यस्तो रास्ट्रको बारेमा जानकारी गराउदै छौं जहाँ युवतीहरु बिहेको लागि युवक नपाए पछि विवाहित पुरुष संग बिहे गर्न म’रिहत्ते गर्छन ।
युवाहरुको कमि भएपछी युवतीहरु विवाहित पुरुषको कान्छी, माईली, साईली दुलही सम्म बन्न तयार रहेका छन् । हो त्यो रास्ट्रको नाम हो सिरिया । सिरिया यस्तो राष्ट्र हो जहाँ गृह यु’द्दको कारण पुरुष को संख्यामा कमि आएको छ ।
लाखौँ युवा हरु ज्यान जोगाउन देश छोडी सकेका कारण पनि सिरियामा युवाहरुको अनिकाल परेको हो ।
धार्मिक हिसावले एक हल हुन सक्ने भनिए पनि महिलाहरुको संख्या उच्च भए पछि सजिलै स’मस्या हल नहुने बताईएको
छ । -एजेन्सीको सहयोगमा तयार पारेको समाचार